Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tsy miato avy any Düsseldorf mankany Karaiba sy Mexico
TUI Fly Deutschland, TUI Fly taloha dia nanapa-kevitra ny handefa sidina lava Boeing 787 Dreamliners avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Düsseldorf (DUS) mankany Mexico sy Carribean. Midika koa izany fa vaovao tsara ho an'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo any Karaiba.
Any Karaiba sy Meksika, ny TUI Fly dia miasa mampifandray an'i Duesseldorf amin'ny
Puerto Plata, Repoblika Dominikanina
Nandritra ny am-polony taona maro Duesseldorf no ankafizin'ny sidina mankany amin'ny toerana fialantsasatra malaza. Miaraka amin'ny LTU, Air Berlin Monarch Airlines ary vao tsy ela i Thomas Cook no tsy misy sary, dia misy zotram-piaramanidina hafa hamenoana ny banga. DUS dia manana sidina mankany amin'ny toerana 190 mihoatra ny eran'izao tontolo izao izay atolotry ny 70 Airlines,
Manidina TUI dia marika marika TUI Airlines Belzika nv. TUI fly dia ampahany amin'ny TUI Group, vondrona fizahan-tany lehibe indrindra manerantany, miaraka amin'ny foibeny any Hannover, Alemana.
TUIfly Deutschland (Alemana) dia nijery ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Duesseldorf hanangana hetsika lavitra ezaka amin'ny alàlan'ny Dreamliner Boeing 787 azy ireo. Ny roa amin'ireo B787 -n'izy ireo dia hiorina ao Duesseldorf.
Duesseldorf dia renivohitry ny fanjakana be olona indrindra ao Northrhine Westphalia ary ivon-fampirantiana, fizahan-tany, varotra ary fitaterana any Alemana.
Ny seranam-piaramanidina alemà fialantsasatra any Langenhagen dia nisafidy an'i Düsseldorf alohan'ny seranam-piaramanidina alemanina maro hafa taorian'ny nandaniany ny tombony sy ny lafy ratsy.
Na dia mbola tsy voalaza aza ny andro marina hanatanterahana ny sidina vaovao, dia hiaraka amin'ny sambo fitsangantsanganana Marella an'ny TUI miasa any Puerto Plata, Cozumel, ary Costa Maya izy ireo.
Amin'izao fotoana izao, ny Eurowings ihany no miasa sidina transatlantic lavitra any Düsseldorf. Na eo aza ny filazan'ny tompon'ny Eurowings Lufthansa fa te hampitsahatra ny zotram-pitaterana lavitra rehetra amin'ny faran'ny taona 2020 farafaharatsiny izy ireo.